MAPISAREMA 8 Vhesi yeshoko nendima | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero MAPISAREMA 8 Vhesi yeshoko nendima
MAPISAREMA 8 Vhesi yeshoko nendima
Nhasi tichave tichidzidza pisare 8, iwo mharidzo kubva kuvhesi kusvika pandima. Mapisarema ndiro pfumo rechisere ra Bhuku raPisarema, inowanzozivikanwa muChirungu nendima yayo yekutanga, muKing James Version, "O ISHE, Ishe wedu, rakanaka sei zita renyu pasi rese!
Mapisarema 8 anotsanangura kuyemura kwekubwinya uye hukuru hwaMwari, hwatino funga isu kufunga nezvakawanda uye nekuremekedza. Inotanga uye ichipera nekubvuma kumwechete kwekurehwa kukuru kweZita raMwari. Iyo inoratidza rudo rwaMwari kuvanhu.
Mapisarema 8 Zvinorehwa Ndima neNdima
Ndima 1: Ishe, Ishe wedu, zita renyu rakaisvonaka sei mupasi rose! Ndiani akaisa kubwinya kwenyu kumusoro kokudenga-denga??
Ndima iyi inotsanangura kubvumidzwa kweiyo inopfuura Mukurumbira wezita raMwari ... Zvinokurudzirwa kuve humbowo hwekuti zita ra Mwari rakanakisa pasirese nepadenga, magadzirirwo akaitwa Mwari pasi nekuriisa panzvimbo yakasimba izvo zvinonetsa kutsanangura mukana uye husinga tsanangurike husina humbowo hwesainzi, kugona kwehungwaru kwakashandiswa naMwari kugadzira zvakasikwa zvese, kutanga kubva pakubuda kwezuva kusvika pakudoka kwezuva, kuyera muchimiro, kuvandudzwa kwezvirimwa nemhuka, basa risinganzwisisike remazuva matanhatu, shure kwezvose, Iye anoita munhu mutariri wemabasa ake. Rudo rusingaenzaniswi, kunyangwe kana munhu akamutadza nekusamuteerera, Haamboregi kutida, uye anotobayira mwanakomana wake mumwechete kuti afire zvivi zvevanhu uye akatiita mugari wenhaka yake.
Ndima 2: Kubva mumuromo mevacheche nevanoyamwaMakamisa simba nekuda kwevavengi venyu, Kuti munyaradze muvengi nemutsivi.
Ndima iyi inotsanangura kusimba kuri kubuda kune zvitubu zvevanhu kubva pakuumbwa kwevacheche mudumbu kusvika nguva yekuzvarwa inoenderera kusvika shanduko yaisanganisira kubviswa kweMweya kubva mumuviri wemunhu, kupihwa hupenyu hwusingaperi. Kunyangwe hazvo Mwari akaita zvisingaverengeki zvisikwa, zvisikwa zvakasiyana zvine njodzi uye zvakashongedzwa zvine simba nesimba, Iye Anopa munhu simba rekutonga pamusoro pawo, anozvidyisa pamusoro pavo, anokwanisa uye anocherekedza zvavachaita. Kunyangwe ngirozi dzinodonha dzakashongedza simba uye nesimba izvo dzakarasa chinzvimbo chavo kudenga, kunyangwe tenzi wavo, iye Satani vavengi vevanhu, Anoita kuti simba Rake riwanikwe kuvarume kuti vakunde dhiabhori kuburikidza nekupa kwechibairo (Evhangeri yaJesu Kristu) vanotenda mukuzvarwa kwake, kufa uye nokumuka kuti vaponeswe.
Ndima 3: Kana ndichicherekedza denga renyu rose, iro basa remimwe yenyu, mwedzi, nenyeredzi zvamakarongedza;
Ndima yacho yakadzokorora zviitiko zvinoshamisa zvaMwari, mabudiro aakaita zuva nemwedzi kuti zvirambe zviripo mabasa ekusimudzira uye kupona kwemunhu, akazvigadza kuti zvive mwenje kumunhu masikati neusiku, chirimwa nemhuka chikafu, kuchinjanisa kunoramba kuchingoitika. yemweya kubva kune chirimwa ichienda kumhuka uye zvinopesana, mvura yekushandiswa kwemazuva ese kwevanhu, shiri dzekudenga nehove dzemakungwa zvekudya, mabwe anokosha ezviwanikwa, uye zvimwe zvakawanda nekuda kweRudo rwake.
Ndima 4Munhu chii, kuti unomufungisisa? uye Mwanakomana wemunhu, kuti unomushanyira?
Ndima iyi inotsanangura kuda munhu, kumuita kuti ave nesimba pamusoro pezvisikwa zviri pasi pano, nekudaro achimuisa asi akaderera pane ngirozi. Mibvunzo kuyera rudo rwaMwari kuvanhu, kubvunza mubvunzo nezve kukosha kwemunhu, kunaka uye kutendeseka kwekukosha kwe varume pamberi paMwari, hurongwa, kuriritira, zvibayiro zvaMwari kuratidza rudo rwake rusinga peri kubva kumazera. Mushure mekusikwa Mwari vakaisa munhu mubindu reEdheni nzvimbo yekuzorora yaMwari kuti afarire zvese zvakawandisa, munhu anoita sarudzo isiriyo kuburikidza nekunyepedzera kwaSatani uye akazodzingwa abva panzvimbo yakanaka, murume akasika aine mbiri isingaenzaniswi, akagadzirwa mune mufananidzo waMwari uine hupenyu hwusingaperi.
Ndima 5-8: Nekuti makamuita muduku zvishoma kuvatumwa, Makamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa.Makamubata kuti ave nesimba pamusoro pemabasa amaoko enyu; Makaisa zvinhu zvese pasi petsoka dzake. Makwai ese nenzombe, hongu, nemhuka dzesango; Shiri dzedenga, nehove dzegungwa, uye zvese zvinofamba nenzira dzegungwa.
Ndima iyi yaishanda kuna Kristu nebasa rekuregererwa kwedu; kunyadziswa kwake, paakaitwa zvishoma pasi pevatumwa, uye nekusimudzirwa kwake, paakashongedzwa korona yekubwinya nerukudzo. Kana isu tiri kucherechedza kubwinya kwaMwari muhumambo hwezvisikwa uye kupa kunofanirwa kutungamirwa neizvozvo, uye kuburikidza neizvozvo, kune kufunga kwekubwinya kwake muumambo hwenyasha. Izvo, mune icho chimiro, iye anosimudzirwa kuti ave Ishe wezvese. Mwari Baba vakamukwidziridza nekuti akange azvininipisa, akamupfekedza korona yekubwinya nerukudzo, kubwinya kwaaive nako naye pasati pasikwa nyika, akagadzwa kwete chete musoro wekereke, asi musoro wezvinhu zvese kuchechi, uye akaisa zvese zvinhu muruoko rwake, akamugadza manejimendi yehumambo hwekutungamira mukubatana pamwe nekuzviisa pasi peumambo hwenyasha. Zvisikwa zvese zvakaiswa pasi petsoka dzake; uye, kunyangwe pamazuva enyama yake, akapa mimwe mienzaniso yesimba rake pamusoro payo, sepaya paakaraira mhepo nemakungwa, uye akagadza hove kubhadhara mutero wake.
Ndima 9: O Ishe, Ishe wedu, rakaisvonaka sei zita renyu yose!
Ndima iyi inodzokororwa kubvuma masimba aMwari anokudzwa nekuvapo kweMununuri, uye achiri kuvhenekerwa neevhangeji yake uye anotongwa nehungwaru hwake nesimba! Mukuimba izvi uye tichinamata pamusoro pazvo, kunyange isu tisingafanire kukanganwa kubvuma, nerudo rwakakodzera, Mwari akajairika kuvanhu, kunyanya mukushandira zvisikwa zvakaderera kwatiri, zvakadaro isu tinofanira kunyanya kuzvishingisa kupa rukudzo kuna Ishe wedu Jesu, nekureurura kuti ndiIshe, vachizviisa pasi pake saIshe wedu, uye nekumirira kusvika tazoona zvinhu zvese zvakaiswa pasi pake uye vavengi vake vese vakaita chitsiko chetsoka dzake.
Ndirini Pandinoda kushandisa Iri Pisarema?
Sezvo taziva zvinorehwa neiri pisairo 8, zvakakosha kuziva kuti uchaishandisa riini. Heano mashoma apo pisarema rinogona kushandira chinangwa chako:
Kana iwe uchinzwa kuti unoonga izvo izvo Mwari zvavakakuitira zvinopfuura chishamiso
Kana moyo wako uchipisa pakurumbidza Mwari.
Kana iwe uchida kukoshesa Mwari nekuda kwerudo rwake pamusoro pehupenyu hwako.
Kana chimwe chinhu chinoshamisa chikaitika kwauri.
Kana iwe uri kuvimba naMwari nezvezvimwe zvinhu uye kana mweya wako uri pasi kana iwe uchinzwa usina chinhu.
Mapisarema 8 Minamato:
Kana iwe uri mune chero eaya mamiriro akanyorwa pamusoro kana anopfuura, ipapo iwo mapisarema 8 minamato ndeyako:
Ishe Jesu, ndinobvuma zvishamiso zvako zvinoshamisa muhupenyu hwangu nezvose zvawakandiitira kuti ndiponese kubva mukutapwa kwadhiyabhorosi, ndokumbira ugamuchire kurumbidza kwangu muzita raJesu. Ameni.
Ishe Jesu, maita basa nekundipa simba renyu uye nekundipa rusununguko pamusoro pezvivi
Ishe Jesu Kirisito, ini ndinobvuma basa renyu rakapera paMuchinjiko weKarivhari, ndinokutendai Jesu nemutengo wakabhadharwa paruponeso rwangu.
Tenzi Jesu Kristu, ndinokutendai nerudo rusingaperi uye nengoni izvo zvinokwana kuita zvandinoshayiwa, Ngarirumbidzwe zita renyu dzvene. Ameni.
Baba muzita raJesu, ndinokuzivisai kuti munotonga pamusoro pamatenga nepasi, hapana angaenzaniswa nehukuru hwenyu.
Baba Vangu uye Mwari Wangu ndichavonga zita renyu chero ndichirarama Uye ndive nemweya wemhino mumhino dzangu muzita raJesu.
Jehovha, ndichakurumbidzai nekuti muri Mwari ane mbiri, uye Baba vane tsitsi.
Baba ndinopa mbiri kuzita renyu nekuti ndimi Mwari anonyaradza vavengi vangu vese muzita raJesu.
Ah Lord, ndinorumbidza zita renyu nekuda kwezishamiso zvezvisikwa zvenyu zvamakagadzira kuti zvibatsire vanhu nezita raJesu.
Oh Lord, ndinokutendai nekundisika ini nemufananidzo nemufananidzo waJesu.
Baba ndinokutendai nenyasha kuti muve mupenyu uye nekuimba nziyo dzenyu dzokurumbidza nhasi muzita raJesu.
Vanodikanwa Ishe, ndiitei kuti ndive neuchapupu hutsva kuti ini ndive nekuwedzera kupa kuvonga kuzita renyu, mukati mevatsvene muzita raJesu.
Vanodikanwa Ishe, ndinosimudza zita renyu kumusoro, pamusoro pemamwe mazita, pamusoro pezvose zviri kudenga nepanyika muzita raJesu.
Aiwa, Ishe, ini ndichazvirumbidza pamusoro penyasha dzenyu, uye ngoni dzenyu huru zuva rese uye ndinokurumbidzai nekuve Mwari wangu muzita raJesu.
Oh Lord, ndinokurumbidzai nekurwa hondo dzehupenyu hwangu muzita raJesu
O Ishe, ndinokurumbidzai, mukati memiedzo yangu, imi ndimi chikonzero nei ndichifara
Oh Lord, ndinokudza zita renyu uye ndinobvuma hukuru hwenyu muzita raJesu.
Oh Lord, ini ndinobatana neungano yehama kuti ndikupei rumbidzo kwauri nekuti waita zvinhu zvikuru muhupenyu hwangu muzita raJesu.
Aiwa, Ishe, ndinorumbidza zita renyu nhasi nekuti vapenyu ndivo vangarumbidza zita renyu, Vakafa havarumbidzi
Oh Lord, ndinokurumbidzai nhasi nekuti makanaka uye nengoni dzenyu dzinogara nekusingaperi muzita raJesu.
Previous nyayaMapisarema 6 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
inoteveraMapisarema 25 Zvinoreva Ndima Ndima
Brian rudo Kubvumbi 27, 2020 At 12:23 am
Yakanaka yakanyorwa mharidzo yemufundisi
25 minamato inonongedza kupokana nemasimba enzvimbo
40 Mavhesi eBhaibheri Nezveuchenjeri kjv
Munamato Kumiririra Zviroto Zvakashata Panguva Yepamuviri
3 Mazuva Ekutsanya Uye Minyengetero Yekununurwa Kwemhuri